WARNING the Myanmar Military leaders, USDP leaders and DASSK led NLD Government of possible ICC indictment, Interpol arrest warrants, invokement of R2P etc followed by Balkanization of Myanmar | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeWARNING the Myanmar Military leaders, USDP leaders and DASSK led NLD Government of possible ICC indictment, Interpol arrest warrants, invokement of R2P etc followed by Balkanization of Myanmar
WARNING the Myanmar Military leaders, USDP leaders and DASSK led NLD Government of possible ICC indictment, Interpol arrest warrants, invokement of R2P etc followed by Balkanization of Myanmar
December 30, 2016 January 1, 2017 drkokogyi
I want to WARN and ask the Myanmar Military leaders, USDP leaders and DASSK led NLD Government…
1/ Why did you downgrade the White cards when the White Card holders were previously not only able to vote in the General Elections but stand and elected as MPs?
2/ Why did you fail to check the citizenship status of White Card holders for few decades?
3/ Why you all want to issue the NVC Green Cards which have NO much difference in VALUE from the White Cards on Rohingyas?
4/ When even the oppressed Rohingyas could not be forced to accept these NVC Green Cards, why do you wish to extend it to implement on Mainland Myanmar Muslims?
5/ Do you think that you could easily repeat the way you treat on Rohingyas on the Mainland Myanmar Muslims?
6/ Do you understand that this forcing of NVC Green Cards on Rohingyas and Mainland Myanmar Muslims could be regarded as committing the first THREE Stages, especially the 3rd. Stage of 10 Stages of Genocide?
7/ Do you never expect that your pushing of NVC Green Cards could trigger the almost unified opposition of all the Muslims from Myanmar. (From=inside and outside Myanmar) with the possible support of GLOBAL Muslims World Wide?
8/ Do you understand now that NVC Green Cards could trigger the process of giving green-light to UN-ICC to charge all of you with Genocide on Muslims of Myanmar and Ethnic Minorities?
9/ Please change your behaviour and treatment on all the Religious Minorities and Ethnic Minorities and STOP the Bama Buddhist SUPREMACIST policy.
If not ICC indictment, Interpol arrest warrants, invokement of R2P etc will follow and ending with Balkanization of Myanmar.
2 thoughts on “WARNING the Myanmar Military leaders, USDP leaders and DASSK led NLD Government of possible ICC indictment, Interpol arrest warrants, invokement of R2P etc followed by Balkanization of Myanmar”
သုံးခေါက်ချိုးတွေနဲ့လဲပြီး
လဲပေးမှာပါ ဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဝှိုက်ကဒ်တွေ ထုတ်ပေး
ဆယ်စုနှစ်၂စုလောက်ကြာသွားတယ် နိုင်ငံသားကဒ် ဘယ်ဆီနေမှန်းမသိ ခရီးသွာလာခွင့်မရှိဘဲ မဲတွေပေးခဲ့ကြရ
ပြန်သိမ်းလိုက်တယ် မဲပေးခွင့်လည်း ဆုံးရှုံးသွားတယ်
အဲ့ဒီ ရိုဟင်ဂျာတွေကိုဘဲ NVC သွားထုတ်ပေးတယ်
နည်းမျိုးစုံနဲ့ အကြပ်ကိုင် ခြိမ်းချောက်ပြီး NVC ပေးတယ်
မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ လူနဲစုကလွဲပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေက ငြင်းခဲ့
ပြည်တွင်းက မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို NVC ပေးဖို့ ကြိုးစား
ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဝှိုက်ကဒ်ပေးပြီး Genocide လုပ်တာ
မြန်မာမွတ်စလင်တွေကို NVC ပေးပြီး ပြည်တွင်းGenocide အစပျိုးလာတယ်
NVC ထုတ်ပေးခြင်းဟာ Genocide အဆင့် ၁၀ဆင့်ထဲက ပထမ ၃ဆင့်ကို ကျူးလွန်လိုက်တာဘဲ
ပြည်တွင်းပြည်ပ မွတ်စလင်တွေရဲ့ အင်နဲ့အားနဲ့ ဆန့်ကျင်မှု
တွေကို မလွဲမသွေကြုံ ရလိမ့်မယ်
လောလောဆယ်ဆယ် ရိုဟင်ဂျာအပေါ် လုပ်ထားတာနဲ့တင်
ICC က အဆင်သင့်စောင့်နေပြီ
Sorry ဘဲ အဲ့ဒီမှာတော့ ထောင်ဝင်စာမရှိဘူး
မည်သူမပြု မိမိမှု လို့သာသဘောထားလိုက်ပါ
ICC မှာ ရင်ကြား ဆက်စေ့ကြပေါ့
Tin Mg Than with Thant Zin and 33 others.
20 hrs · Yangon, Myanmar ·
”NV Card ထုတ်ပေးတာဟာပြည်သူတွေကြားမှာ
☑️ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားသူတွေကို NV Card ထုတ်ပေးတာဟာ နောက်ပိုင်း ဒီကတ်ပြားကိုင်ဆောင်ထားသူတွေအားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြီး တရား မဝင် ဝင်ရောက်လာသူတွေလို့ အထင်မှားပြီး ပြည်သူတွေကြား မှာ စိတ်ဝမ်းကွဲစရာ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
▪️အရင်တုန်းကလည်း နိုင်ငံသားစိစစ်ခြင်းကိစ္စကို အပြီးအပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မပြုခဲ့ဘဲ ယာယီသက်သေခံကတ်ပြား(White Card)များကို ထုတ်ပေးခဲ့ တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်သူများအကြား စိတ်ဝမ်းကွဲခဲ့ရပြီး အပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်တွေ ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။
နိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့ရလို့ နိုင်ငံသား ပြည်သူအားလုံး နစ်နာဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
▪️ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားလျှောက်ထားသူတွေကို NV Card ထုတ်မပေးဘဲ ကျောသားရင်သားမခွဲ တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် စိစစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့အညီ နိုင်ငံသားဖြစ်သူတွေကို ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ အမြန်ဆုံး နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား ထုတ်ပေးဖို့ အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။
▪️အရင်အစိုးရလက်ထက်က မိုးပွင့်စီမံချက်၊အခု အစိုးရ လက်ထက် သစ္စာစီမံချက်တွေနဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှဲ့ အိမ်ထောင်စု စာရင်းတွေကို ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့နေရာမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ချန်လှပ်ထားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား လျှောက်ထားတဲ့အခါ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါ ၊ မွေးတိုးစာရင်း ရေးသွင်းတဲ့အခါမှာလည်း ကြန့်ကြာမှု ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
▪️ နိုင်ငံသား စိစစ်မှု ကြန့်ကြာတဲ့ အတွက်ကြောင့်ပညာသင်ကြားရေးကိစ္စ အခက်အခဲရှိသူတွေကို အလျင်အမြန် ဦးစားပေး စိစစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
▪️ နိုင်ငံသား စိစစ်တဲ့ကိစ္စ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း ရွှေ့ပြောင်းတဲ့ ကိစ္စ၊ မွေးတိုး စာရင်းသွင်းတဲ့ကိစ္စများတွေကို တိကျမှန်ကန် မြန်ဆန်စေဖို့ အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ စီမံချက်ချဆောင်ရွက်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
▪️▪️▪️ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးက
🔹 ပြည်သူမတွေကြားမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲစရာဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့ NV Card ထုတ်ပေးနေ တဲ့ကိစ္စ။
🔹တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့အညီ နိုင်ငံသားဖြစ်သူတွေ ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ရရှိစေရေးကိစ္စ။
တွေကို နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကို ရှင်းလင်းတင်ပြတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
▪️▪️▪️ဒီကိစ္စတွေကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေလည်း အရှိ အမှန်အတိုင်း နားလည်သိရှိအာင် ရှင်းလင်းတင်ပြနေပါတယ်။
. တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်